मेरो हैन नपालको अवार्ड- गरिमा पन्त :: Press Chautari ::
मेरो हैन नपालको अवार्ड
६–११ जेठमा श्रीलंकाको कोलोम्बोमा सम्पन्न सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१४ मा नेपाली चलचित्र झोलाकी नायिका गरिमा पन्तले सर्वोकृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड चुमेकी छिन् । सती प्रथा माथि बनेको यादव भट्टराई निर्देशित यो चलचित्र विसं २०७०मा दर्शकले अत्याधिक रुचाएको तथा ब्यवसायिक रुपमा सफल फिल्म थियो । सार्क कल्चर सेन्टरले सार्क राष्ट्रका फिल्म समाबेस गराउने महोत्सवमा यो ४ वर्ष अघिबाट शुरु भएको हो । नेपाली नायिकाले पहिलोपटक पाएको अवार्ड हो यो । उक्त फेष्टिभलमा सहभागी भएको नेपालको अर्को फिल्म सा“घुरोले चाहि रजत अवार्डसंगै निर्देशक जोयस पाण्डेले जुरी तर्फबाट उत्कृष्ट नव प्रतिभा सटिफिर्केट अफ रेकग्निसन अवार्ड पनि प्राप्त गरेका थिए । निखील दाई, जीवनमृत्यु, फुल, पिरतीको फुल, पराई, मनले मनलाई छुन्छ लगायतका डेढ दर्जन चलचत्रिमा अभिनय गरेकी तनहु बराहीकी गरिमा मेहनत र धैर्यता भए सफल हुने बताउछिन् ।
अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेष्टिभलमा सर्वोकृष्ट नायिकाको अवार्ड जित्दा कस्तो महसुस भयो ?
मैले सोचेकी पनि थिइन् यस्तो अन्तराष्ट्रिय अवार्ड पाउछु भनेर । एकदमै हिट हिरोइन पनि हैन तर कामप्रति इमान्दार भएकी मेहनत र धैर्यता गर्न सक्ने भएकाले राम्रा काम गर्दा त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो आउने रहेछ भन्ने अनुभव गरेकी छु । मलाई लाग्छ, यो अवार्ड म भन्दा बढि नेपाली नायिकाले पाएको हो, नेपालले पाएको हो । म अन्यन्तै खुशी छु ।
झेला हिट भएपछि त तपाईलाई कामको मारामार भा’छ हैन ?
मेलै धेरै काम पाइरहेकी छु । खासमा झेलाकै सफलता अनी त्यसमा मैले निर्वाह गरेको भुमिकाका कारण पनि मलाई निर्माता निर्देशकले अभिनयमा विश्वास गरेका छन् । भर्खरै ठुली चलचित्र सके अहिले सम्भु प्रधानले निर्देशन गर्नु भएको रंग बैजनी नामक फिल्मी गरिरहेकी छु । करिअरमा यस्तो कुराले ठुलो भुमिका खेल्दो रहेछ । हुन त मेलै यस अघिका फिल्ममा पनि अभिनयमा निकै मेहनत गरेकी हु, तर मेरो काम झेलामा बढि देखियो । विषयबस्तुले पनि दर्शक तान्यो ।
त्यसो भए अब नेपाली चलचित्रमा झेला जस्ता सिनेमा बन्नुपर्छ ?
यो पुरानो नेपाली समाजको यथार्थ हो, हाम्रो इतिहास हो । पक्कै बन्नुपर्छ यस्ता फिल्म । तर यसको अर्थ सवै यस्तै खाले बन्नुपर्छ भन्ने हैन । फेरि अहीले चलचित्र जो पनि जस्तोपनि मानछे निर्देशक बन्नेको देखिन्छ, रहर गर्नेहरु धेरै छन् यस्ता विषय बनेको रहरले भन्दा पनि गहिरो ज्ञान, अध्ययन चाहिन्छ । राम्रो सिनेमा उतार्न सक्दा डुव्ने सम्भावना पनि कम नै रहन्छ ।अहीले मान्छेले पढ्ने, सुन्ने भन्दा दृष्यमा हेर्न रुचाउछन्, त्यसैले राम्रो फिल्म बनाउदा मेहनत गर्दा प्रतिफल पनि राम्रो नै हुन्छ ।
नेपाली चलचित्र अहीले कता जादैछ ?
सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । पहिला पहिला एकै खालमा सुत्रबद्ध फिल्म, माया प्रेम भन्दा बाहीरका फिल्म बन्दैनथे, अहीले नेपाली सिनेमा विषयबस्तुमा धेरै फैलिएको छ, फरक फरक विषयका फिल्म बनीरहेका छन् । सिनेमा पढेका राम्रा निर्देशकहरु आइरहेका छन्, विदेशी फेष्टीभलमा नेपाली फिल्म पुग्छन् । यो हुदा हुदै पनि अत्याधिक फिल्म बन्नु, अश्लीलता बढ्नु, कसैलाई निर्देशक कलाकार बन्न मन लाग्यो भने रहरका भरमा यो क्षेत्रको फिल्म बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ कतिपय यस्तै कलाकार निर्देशकका कारण राम्रा फिल्मप्रति वितृष्णा जगाउने काम पनि भइरहेको छ ।
नेपाली चलचत्रिमा अहीले नायिका आएसगै हराइहाल्छन, किन टिक्न सक्दैनन् ?
अभिनय, मेहनतको बलमा आएका टिक्छन्, तर पर्दामा देखिने होडमा कसैको ब्याइप्रेण्ड बनेर अनी कतिपय निर्माता निर्देशकले गर्लफ्रेण्ड बनाएर या मिसयुज भएर आएका कसरी टिक्न सक्छन् ? तपाईलाई थाहै छ,कति नया नायिका भन्दै आउछन् १ वर्ष नपुग्थ्दै कता हराउछन् थाह हुदैन । हिरोको पनि त्यही हो, पैसा हालेर हिरो भएकाहरुको आयु पनि १,२ फिल्म पछि त्यही हो । पहिला जस्ता बजार, थोरै फिल्कर्मी छैन, प्रतिष्पर्धा चुलिदो छ, त्यसैले सानो मेहनत, सामान्य अभिनयले मात्र अब टिक्न सजिलो छैन या कसैले टिकाएर पनि टिक्न गाह्रो छ ।
विहिवार, २०७१ जेष्ठ २२ गते १८:३७ / Thursday, Jun 05, 2014 6:37 pm